“မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ ခြံစောင့်အဘိုးကြီးရဲ့ သနားစရာ ရင်နင့်ဖွယ် ဘဝ ” (ဖြစ်ရပ်မှန်) - Myanmar Express
September 29, 2017 By Myanmar Express in သရဲသဘက် No Comments Tags: အဘိုးကြီး
ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက Engineering နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု” အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ ကျွန်တော်က Construction Project Manger ဆိုတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေရတယ်ဗျာ အလုပ်စဝင်တာက သိပ်တော့မကြာသေးဘူး ” ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကို ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်က မြို့တစ်မြို့ကနေပြီး Project တစ်ခုလာအပ်တယ်ဗျာ။
အဲ့ဒီ Project နေရာက အရင်တုန်းကတော့ သချိုင်္င်းကြီးလို့ပြောသံတော့ကြားတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လည်း ဂရုမစိုက်ပဲ အဲ့ဒီ Project ကိုလက်ခံလိုက်တယ် Engineer တွေဆိုတာကတော့ဒီလ်ုပဲလေ ခရီးသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ …. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က Manager ဆိုတော့လည်း Project ကြီးအစအဆုံးပြီးအောင်တာဝန်ယူရတာပေါ့ဗျာ .. တစ်မနက်မှာ ကျွန်တော်က အဖွဲ့သားတွေနဲ့ အဲ့ဒီ Project ရဲ့မြေနေရာ ပုံစံတွေအားလုံး ကိုကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတာေ ပါ့ Project ရဲ့နေရာကိုရောက်တော့ ကျွန်တော်တစ်ခုအကဲခတ်လိုက်မိတယ် ဘာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ Project ကမြို့ရဲ့အစွန်ဆုံးမှာဆိုတော့ကား တိတ်ဆိတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းဆိုအရမ်းကိုကျောချမ်းဖွယ်ကောင်းတဲ့တည်နေရာ ကြီးဗျာ …
ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီ Project ကိုစစရောက်ချင်း ကားပေါ်ကနေစဆင်းတဲ့အချိန်တည်းကပဲ တစ်ခုခုကိုစိတ်ထဲကနေခံစားမိ နေတာဗျ .. နောက်ပြီးခြံစောင့်အဖိုးကြီးကလည်း အနည်းဆုံးတော့အသက် ၆၀ ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်. . သူ့ပုံစံက ထူးထူးဆန်းဆန်းဗျ ရှေးအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းက ခြံစောင့်တွေ ဝတ်စားထားတဲ့အတိုင်း သူဝတ်ထားတယ် နောက်ပြီးအမြဲတမ်းတစ်ခုခုကိုကြောက်လန့်နေသလိုပဲ မျက်နှာကလည်းတကုပ်ကုပ်နဲ့ စကားလည်းသိပ်ပြောဘူးဗျ..
သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လည်းသိချင်လိုစိတ် နဲ့ “ဦး ဘာကိုတစ်ချိန်လုံးကြောက်နေတာလဲ” ဆိုပြီးမေးလိုက်မိတယ် …. သူ့ဆီကအဖြေကိုတော့ပြန်မရလို က်ဘူး ကျွန်တော်မေးပြီးတာခနမှာပဲ သူ့ဘာသူကျွန်တော့်ရှေ့ကနေတစ်ခွန်းမှမပြောပဲလှည့်ထွက်သွားတာဗျ … ညနေ နေဝင်ချိန်လည်းရောက်ပြီ လေပြေညင်းကတသုန်သုန်နဲ့ ခန္စာကိုယ်ဆီကို အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့တိုးဝေ့လာေ နလေပြီ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း Project ကြီးကိုစနစ်တကျသေချာစိစစ် တိုင်းထွာပြီးလို့ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြတာ ပေါ့ အဲ့ဒီအခါမှာပဲ ခြံစောင့်အဖိုးကြီးက ကျွန်တော့်အနားကပ်လာပြီ “တူလေး ဒီ ခြံမှာနေနေသေးသရွေ့ မဖွယ်မရာစကားလုံးတွေ မပြောမိစေနဲ့” တဲ့ကျွန်တော့်နားမှာ အဲ့စကားလေးတီးတိုးပြောပြီးတာနဲ့ လှည့်ထွက်သွားတာပဲဗျာ ကျွန်တော်ကလည်း ဘာမှတော့ထပ်မမေးလိုက်မိဘူး ….
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့လည်း တည်းခိုဆောင်ဆီပြန်လာတာပေါ့ အချိန်ကလည်း ၈:၀၀ လောက်ရှိပြီ မိုးရာသီဆိုတော့ မိုးကလည်းတဖွဲဖွဲ လေကလည်းတဝီဝီ တိုက်နေတာပေါ့ တည်းခိုဆောင်ရောက်လည်းရောက် ရော ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေက လူခွဲပြီး သုံးယောက်တခန်းစီ သူ့အခန်းနဲ့သူဝင်ကြတော့ပေါ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်းပဲကျ န်တော့တယ် ကျွန်တော်နဲ့အဖွဲ့သားထဲက နောက်ဆုံးကျန်တဲ့တစ်ယောက်နဲ့ အဲ့ဒီအခန်းကိုပဲသုံးရတာပေါ့အခန်းထဲရောက်တော့ကျွန်တော်က လည်း ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ “သုတရေ့ ငါပဲအရင်ရေသွားချိုးလိုက်မယ်နော်” ဆိုပြီးရေသွားချိုးတာပေါ့ဗျာရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး တခါးပိတ်ပိတ်ချင်းမှာပဲ အပြင်ကနေပြီး သုတအသံအကျယ်ကြီးအော်ဟစ်ပြီး ထသောင်းကျန်းတော့တာပဲ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိသမျှလည်းလိုက်ပ စ်ပေါက်တော့တာပဲ။
ကျွန်တော်လည်း “ဟေ့ကောင်သုတ မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲကွာ” လို့မေးလိုက်တယ် … ဟာ ကျွန်တော့်ကိုပါ ဝင်ပေါက်ရော… အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သုတက မျက်ဆံနီရဲနေပြီး အသားကလည်းဖြုရော်နေတာပဲဗျာ တကယ့်သွေးပျက်စရာပဲ ခနနေတော့သူစကားတစ်ခွန်းအကြယ်ကြီးအော်တယ် “ငါ့တို့နေရာနောက်ထပ်မလာနဲ့ ” ဆိုတဲ့စကားအကျယ်ကြီးထအော်တယ်ဗျာ .. ဘေးအခန်းက သူငယ်ချင်းတွေလဲ “ဟေ့ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲ” ဆိုပြီးကျွန်တော့်ကိုမေးကြတာပေါ့ .. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သုတ ကိုတော့ နည်းနည်းရိပ်မိနေပြီ … သူ့ကိုသရဲဝင်ပူးနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့ သုတကနောက်တစ်ခါအကျယ်ကြီးထအော်ပြန်ရောဗျာ “ငါပိုင်တဲ့နေရာ ငါ့နေရာ … မင်းတို့ကောင်တွေ ဝင်မလာနဲ့” ဆိုပြီး နောက်ဆုံးအကျယ်ကြီးတစ်ခေါက် အော်ပြီး သုတက မေ့လဲသွားရော…
ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာဝန်သွားခေါ်ရတာပေါ့ဗျာ … နောက်နေ့မနက်မှာ သုတကို အကျိုးအကြောင်းသေသေချာချာ မေးကြည့်လိုက်တော့မှ မနေ့က အဲ့ဒီခြံထဲမှာ သူပေါက်တတ်ကရစကားတွေပြောမိလို့တဲ့ “ဒီခြံက အရင်တုန်းက သင်္ချိုင်းလို့ပြောသံကြားတယ်. . အဲ့ဒါတွေငါဂရုမစိုက်ဘူး မင်းတို့သရဲတွေလာချင်တဲ့ကော င်လာကွာ မကြောက်ဘူး တကယ်နိုင်ရင် ငါ့ကိုယ်ထဲဝင်ပူးကြပေါ့ ဟားဟားဟား” ဆိုပြီးမပြောသင့်တာတွေပြောလိုက်လို့ ညကကိစ္စဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတ ယ် … အဲ့ဒီနောက်မှာပဲ အင်္ချိုင်းခြံကြီးကို ဘုန်းကြီးတွေပင့် ပြီးမှ သရဲတွေကိုတခြားတစ်နေရာ ပို့လိုက်တယ်လို့တော့ပြောတာ ပဲ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါတွေက တကယ်လားဆိုတာတော့ယုံရဖို့အခ က်သား… နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတစ်ခု ပြောပြဖို့ကျန်သေးတယ် .. အဲ့ဒီခြံမှာ ခြံစောင့်လို့ဆိုတဲ့ အဘိုးကြီးက တကယ်တမ်းကျတော့ လူမဟုတ်ပါဘူး …
သူက အဲ့ဒီသင်္ချိုင်းထဲက သင်္ချိုင်းစောင့်တစ်ယောက်ဆိုတာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တော့မှသိလိုက်ရတ ယ် … မြင်တွေ့ဖူးတဲ့လူတွေပြောတာက တော့ အဲ့ဒီအဖိုးကြီးက အရင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက ဗိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာ ခြံစောင့်အလုပ်သမားတစ်ယောက် ဆိုလားပဲတစ်နေ့မှာ သူ့အလုပ်ရှင်က သူ့ကိုအလိုမကျလို့အလုပ်ဖြုတ်မယ်လုပ်တော့ သူကလည်းဒီကလွဲပြီးတခြားနေရာ မှာသွားနေဖို့နေစရာမရှိလို့ အနူးအညွတ် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်နေတြာေ ကာင့် ဗိုလ်ကြီးကလည်း စိတ်မရှည်စွာနဲ့ပဲ လက်ထဲမှာရှိတဲ့ သေနတ်နဲ့ပစ်မိလို့သေသွားတယ် ဆိုပဲ… ဒီလိုနဲ့ပဲ သူသေသွားတော့လည်း သင်္ချိုင်းမှာ ခုချိန်ထက်ထိမကျွတ်မလွတ်နို င်သေးဘဲ သချိုင်းစောင့်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတုန်းပဲ… ကျွန်တော်မသိတဲ့အချက်ရှိတယ် “သူက အဲ့ဒီအိမ်မှာ အစွဲအလန်း ကြီးနေရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့သင်္ချိုင်းမှာ သင်္ချိုင်းစောင့် သွားဖြစ်နေရလဲဆိုတာ?”
ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့သနားဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်ကို သိလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကိုယ် တိုင်ကလည်း သူ့အတွက်အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြ စ်ပြီး ခုချိန်ထိညအိပ်ရာဝင်ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ခြံစောင့်အဘိုးကြီးအတွက် အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပ္ပယ်ဘုံဘဝက နေ လွတ်မြောက်ပါစေလို ဆုတောင်းမေတ္တာပို့နေဆဲပါ …..
“မကြှတျလှတျသေးတဲ့ ခွံစောငျ့အဘိုးကွီးရဲ့ သနားစရာ ရငျနငျ့ဖှယျ ဘဝ ” (ဖွဈရပျမှနျ)
ကြှနျတျောလုပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီက Engineering နဲ့ဆိုငျတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခု” အဲ့ဒီကုမ်ပဏီမှာ ကြှနျတျောက Construction Project Manger ဆိုတဲ့နရောမှာတာဝနျယူလုပျဆောငျနရေတယျဗြာ အလုပျစဝငျတာက သိပျတော့မကွာသေးဘူး ” ဒီလိုနဲ့ပဲ တဈနမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့ကုမ်ပဏီကို ရှမျးပွညျနယျဘကျက မွို့တဈမွို့ကနပွေီး Project တဈခုလာအပျတယျဗြာ။
အဲ့ဒီ Project နရောက အရငျတုနျးကတော့ သခြိုင်ျငျးကွီးလို့ပွောသံတော့ကွားတယျ ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောတို့လညျး ဂရုမစိုကျပဲ အဲ့ဒီ Project ကိုလကျခံလိုကျတယျ Engineer တှဆေိုတာကတော့ဒီလျုပဲလေ ခရီးသှားပွီးအလုပျလုပျရတာ …. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယျကိုယျတိုငျက Manager ဆိုတော့လညျး Project ကွီးအစအဆုံးပွီးအောငျတာဝနျယူရတာပေါ့ဗြာ .. တဈမနကျမှာ ကြှနျတျောက အဖှဲ့သားတှနေဲ့ အဲ့ဒီ Project ရဲ့မွနေရော ပုံစံတှအေားလုံး ကိုကွညျ့ဖို့ထှကျလာခဲ့ကွတာေ ပါ့ Project ရဲ့နရောကိုရောကျတော့ ကြှနျတျောတဈခုအကဲခတျလိုကျမိတယျ ဘာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ Project ကမွို့ရဲ့အစှနျဆုံးမှာဆိုတော့ကား တိတျဆိတျပွီး တဈယောကျတညျးဆိုအရမျးကိုကြောခမျြးဖှယျကောငျးတဲ့တညျနရော ကွီးဗြာ …
ကြှနျတျောတို့ အဲ့ဒီ Project ကိုစစရောကျခငျြး ကားပျေါကနစေဆငျးတဲ့အခြိနျတညျးကပဲ တဈခုခုကိုစိတျထဲကနခေံစားမိ နတောဗြ .. နောကျပွီးခွံစောငျ့အဖိုးကွီးကလညျး အနညျးဆုံးတော့အသကျ ၆၀ ကြျောဝနျးကငျြလောကျဖွဈမယျ. . သူ့ပုံစံက ထူးထူးဆနျးဆနျးဗြ ရှေးအင်ျဂလိပျခတျေတုနျးက ခွံစောငျ့တှေ ဝတျစားထားတဲ့အတိုငျး သူဝတျထားတယျ နောကျပွီးအမွဲတမျးတဈခုခုကိုကွောကျလနျ့နသေလိုပဲ မကျြနှာကလညျးတကုပျကုပျနဲ့ စကားလညျးသိပျပွောဘူးဗြ..
သူဘာဖွဈနလေဲဆိုတာ ကြှနျတျောလညျးသိခငျြလိုစိတျ နဲ့ “ဦး ဘာကိုတဈခြိနျလုံးကွောကျနတောလဲ” ဆိုပွီးမေးလိုကျမိတယျ …. သူ့ဆီကအဖွကေိုတော့ပွနျမရလို ကျဘူး ကြှနျတျောမေးပွီးတာခနမှာပဲ သူ့ဘာသူကြှနျတေျာ့ရှကေ့နတေဈခှနျးမှမပွောပဲလှညျ့ထှကျသှားတာဗြ … ညနေ နဝေငျခြိနျလညျးရောကျပွီ လပွေညေငျးကတသုနျသုနျနဲ့ ခန်စာကိုယျဆီကို အေးစိမျ့စိမျ့နဲ့တိုးဝလေ့ာေ နလပွေီ ကြှနျတျောတို့တှလေညျး Project ကွီးကိုစနဈတကသြခြောစိစဈ တိုငျးထှာပွီးလို့ ပွနျတော့မယျဆိုပွီးလုပျကွတာ ပေါ့ အဲ့ဒီအခါမှာပဲ ခွံစောငျ့အဖိုးကွီးက ကြှနျတေျာ့အနားကပျလာပွီ “တူလေး ဒီ ခွံမှာနနေသေေးသရှေ့ မဖှယျမရာစကားလုံးတှေ မပွောမိစနေဲ့” တဲ့ကြှနျတေျာ့နားမှာ အဲ့စကားလေးတီးတိုးပွောပွီးတာနဲ့ လှညျ့ထှကျသှားတာပဲဗြာ ကြှနျတျောကလညျး ဘာမှတော့ထပျမမေးလိုကျမိဘူး ….
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြှနျတျောတို့လညျး တညျးခိုဆောငျဆီပွနျလာတာပေါ့ အခြိနျကလညျး ၈:၀၀ လောကျရှိပွီ မိုးရာသီဆိုတော့ မိုးကလညျးတဖှဲဖှဲ လကေလညျးတဝီဝီ တိုကျနတောပေါ့ တညျးခိုဆောငျရောကျလညျးရောကျ ရော ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့သားတှကေ လူခှဲပွီး သုံးယောကျတခနျးစီ သူ့အခနျးနဲ့သူဝငျကွတော့ပေါ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့နောကျဆုံးနှဈယောကျခနျးတဈခနျးပဲကြ နျတော့တယျ ကြှနျတျောနဲ့အဖှဲ့သားထဲက နောကျဆုံးကနျြတဲ့တဈယောကျနဲ့ အဲ့ဒီအခနျးကိုပဲသုံးရတာပေါ့အခနျးထဲရောကျတော့ကြှနျတျောက လညျး ပငျပငျပနျးပနျးနဲ့ “သုတရေ့ ငါပဲအရငျရသှေားခြိုးလိုကျမယျနျော” ဆိုပွီးရသှေားခြိုးတာပေါ့ဗြာရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီး တခါးပိတျပိတျခငျြးမှာပဲ အပွငျကနပွေီး သုတအသံအကယျြကွီးအျောဟဈပွီး ထသောငျးကနျြးတော့တာပဲ အခနျးထဲမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှရှေိသမြှလညျးလိုကျပ ဈပေါကျတော့တာပဲ။
ကြှနျတျောလညျး “ဟကေ့ောငျသုတ မငျးဘာဖွဈနတောလဲကှာ” လို့မေးလိုကျတယျ … ဟာ ကြှနျတေျာ့ကိုပါ ဝငျပေါကျရော… အဲ့လိုဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ သုတက မကျြဆံနီရဲနပွေီး အသားကလညျးဖွုရျောနတောပဲဗြာ တကယျ့သှေးပကျြစရာပဲ ခနနတေော့သူစကားတဈခှနျးအကွယျကွီးအျောတယျ “ငါ့တို့နရောနောကျထပျမလာနဲ့ ” ဆိုတဲ့စကားအကယျြကွီးထအျောတယျဗြာ .. ဘေးအခနျးက သူငယျခငျြးတှလေဲ “ဟကေ့ောငျဘာဖွဈတာလဲ” ဆိုပွီးကြှနျတေျာ့ကိုမေးကွတာပေါ့ .. အဲ့ဒီအခြိနျမှာကြှနျတျောသုတ ကိုတော့ နညျးနညျးရိပျမိနပွေီ … သူ့ကိုသရဲဝငျပူးနတေယျဆိုတာကိုပေါ့ သုတကနောကျတဈခါအကယျြကွီးထအျောပွနျရောဗြာ “ငါပိုငျတဲ့နရော ငါ့နရော … မငျးတို့ကောငျတှေ ဝငျမလာနဲ့” ဆိုပွီး နောကျဆုံးအကယျြကွီးတဈခေါကျ အျောပွီး သုတက မလေဲ့သှားရော…
ကြှနျတျောတို့လညျးဆရာဝနျသှားချေါရတာပေါ့ဗြာ … နောကျနမေ့နကျမှာ သုတကို အကြိုးအကွောငျးသသေခြောခြာ မေးကွညျ့လိုကျတော့မှ မနကေ့ အဲ့ဒီခွံထဲမှာ သူပေါကျတတျကရစကားတှပွေောမိလို့တဲ့ “ဒီခွံက အရငျတုနျးက သခငြ်္ိုငျးလို့ပွောသံကွားတယျ. . အဲ့ဒါတှငေါဂရုမစိုကျဘူး မငျးတို့သရဲတှလောခငျြတဲ့ကော ငျလာကှာ မကွောကျဘူး တကယျနိုငျရငျ ငါ့ကိုယျထဲဝငျပူးကွပေါ့ ဟားဟားဟား” ဆိုပွီးမပွောသငျ့တာတှပွေောလိုကျလို့ ညကကိစ်စဖွဈသှားတယျလို့ပွောတ ယျ … အဲ့ဒီနောကျမှာပဲ အခငြ်္ိုငျးခွံကွီးကို ဘုနျးကွီးတှပေငျ့ ပွီးမှ သရဲတှကေိုတခွားတဈနရော ပို့လိုကျတယျလို့တော့ပွောတာ ပဲ ဒါပမေယျ့အဲ့ဒါတှကေ တကယျလားဆိုတာတော့ယုံရဖို့အခ ကျသား… နောကျထပျထူးဆနျးတာတဈခု ပွောပွဖို့ကနျြသေးတယျ .. အဲ့ဒီခွံမှာ ခွံစောငျ့လို့ဆိုတဲ့ အဘိုးကွီးက တကယျတမျးကတြော့ လူမဟုတျပါဘူး …
သူက အဲ့ဒီသခငြ်္ိုငျးထဲက သခငြ်္ိုငျးစောငျ့တဈယောကျဆိုတာဘေးပတျဝနျးကငျြကရှာတှကေိုမေးကွညျ့လိုကျတော့မှသိလိုကျရတ ယျ … မွငျတှဖေူ့းတဲ့လူတှပွေောတာက တော့ အဲ့ဒီအဖိုးကွီးက အရငျအင်ျဂလိပျခတျေကတညျးက ဗိုလျတဈယောကျရဲ့အိမျမှာ ခွံစောငျ့အလုပျသမားတဈယောကျ ဆိုလားပဲတဈနမှေ့ာ သူ့အလုပျရှငျက သူ့ကိုအလိုမကလြို့အလုပျဖွုတျမယျလုပျတော့ သူကလညျးဒီကလှဲပွီးတခွားနရော မှာသှားနဖေို့နစေရာမရှိလို့ အနူးအညှတျ အကွိမျကွိမျတောငျးပနျနတေွာေ ကာငျ့ ဗိုလျကွီးကလညျး စိတျမရှညျစှာနဲ့ပဲ လကျထဲမှာရှိတဲ့ သနေတျနဲ့ပဈမိလို့သသှေားတယျ ဆိုပဲ… ဒီလိုနဲ့ပဲ သူသသှေားတော့လညျး သခငြ်္ိုငျးမှာ ခုခြိနျထကျထိမကြှတျမလှတျနို ငျသေးဘဲ သခြိုငျးစောငျ့တဈယောကျ ဖွဈနတေုနျးပဲ… ကြှနျတျောမသိတဲ့အခကျြရှိတယျ “သူက အဲ့ဒီအိမျမှာ အစှဲအလနျး ကွီးနရေဲ့သားနဲ့ ဘာလို့သခငြ်္ိုငျးမှာ သခငြ်္ိုငျးစောငျ့ သှားဖွဈနရေလဲဆိုတာ?”
ဒါပမေယျ့လညျး သူ့ရဲ့သနားဖှယျရာဖွဈရပျကို သိလိုကျရတော့ကြှနျတျောကိုယျ တိုငျကလညျး သူ့အတှကျအရမျးစိတျမကောငျးဖွ ဈပွီး ခုခြိနျထိညအိပျရာဝငျဘုရားရှိခိုးပွီးတိုငျး ခွံစောငျ့အဘိုးကွီးအတှကျ အဲ့ဒီမကောငျးတဲ့အပ်ပယျဘုံဘဝက နေ လှတျမွောကျပါစလေို ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့နဆေဲပါ …..
« ကျင့်ယူ၍ ရသော ပညာရပ်များထဲမှ … နတ်မျက်စိ ကျင့်စဉ်… » ထူးအယ်လင်းကလည်း သေနတ် ကိုင်ပါတယ်တဲ့